RecipeTube Cooking Contest
Be inspired to cook upastorm - be it forafamily meal,aspecial occasion or to celebrate Myanmar’s many festivals. Our recipe section provided by the top chefs from Myanmar and around the world will take you through the steps of cooking your favourite local dishes or international meals all in the comfort of your own kitchen. Be inspired!
Pan Grilled Beef Tenderloin with Balsamic Green Beans (အမဲမိုးခိုသား နှင့် ဝိုင်နီရှာလကာ ပဲသီးစိမ်း)
Healthy Week – အမဲမိုးခိုသားနှင့်ဝိုင်နီရှာလကာပဲသီးစိမ်း။
အမဲမိုးခိုသား ၂၂၀ ဂရမ်
ဆားလွတ်ထောပတ် ၂ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဝါကြီး ၀.၅ လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ ( စဉ်းပြီး ) ၁ ဇွန်း
အမဲရိုးပြုတ်ရည် ၁၀၀ မီလီလီတာ
ပဲသီးစိမ်း ၁၀၀ ဂရမ်
အာလူး ၁ လုံး
ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ၅ လုံး
သံပုရိုသီး ၁ စိပ်
ဝိုင်နီရှာလကာရည် ၂ ဇွန်း
ငရုပ်ကောင်းမှုန့်အနည်းငယ်
ရို့ မယ်ရီရွက်ခြောက် အနည်းငယ်
သံလွင်ဆီ ၁ ဇွန်း
၁ ။ အာလူး ကိုသန့် စင်ပြီး အခွံမနွှာဘဲ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ရို့ မယ်ရီရွက်ခြောက် ၊ သံလွင်ဆီ တို့ နှင့် အရသာသွင်းရျွ် မုန့် ဖုတ် ဖိုတွင် ၁၈၀ံစင်တီဂရိတ် ဖြင့် ၂၅ မိနစ်ခန့် ဖုတ်ထားပါ။
၂ ။ ဒယ်အိုးတွင် ဆားလွတ်ထောပတ် ၁ စွန်း ကိုအပူပေးပြီး အသင့်လှီးထားသော ကြက် သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဝါကြီး တို့ ကို ၂ မိနစ်ခန့် ဆီသတ်ပါ ၊ ကြက်သွန်နီ မွှေးလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်ရျွ် ၁ မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပြီး အသင့်ပြုတ်ထားသော အမဲရိုးပြုတ်ရည် ထည့်ရျွ် ၃ မိနစ်ခန့် ချက်ပေးပါ။
၃ ။ ကြက်သွန်နီ ကျက်လျှင် အသင့်သန့် စင်ထားသော ပဲသီးစိမ်း ထည့်ချက်ပြီး ဝုိင်နီရှာလကာရည် နှင့် ၂ မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ် ပြီးချက်ပေးပါ ၊ ပဲသီးစိမ်း အနည်းငယ် ကျက်လျှင် မီးဖိုပေါ်မှဖယ်ခွာရျွ် ဆားလွတ်ထောပတ် ၁ စွန်းထည့်ပြီး အရသာ ကို ဆား နှင့် ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဖြင့်ထိမ်းညှိထားပါ။
၄ ။ အမဲမိုးခိုသား ကို ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဖြင့် အရသာသွင်းပြီး ဒယ်အိုးကို အပူပေးရျွ် သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် ၃ မိနစ် ခန့် တစ်ဖက်စီ အိုးကပ်ကင်ပေးပါ ၊ နှစ်သက်သော အနေအထားသို့ ကျက်လျှင် မီးဖိုမှဖယ်ခွာရျွ် ၅ မိနစ်ခန့် အအေး ခံ ထားပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော အာလူး ၊ ပဲသီးစိမ်း တို့ နှင့် တွဲဖက်တည်ခင်းပါ။
Healthy Week – Pan Grilled Beef Tenderloin with Balsamic Green Beans.
Beef Tenderloin 220 g
Yellow Onion ½ number
Minced Garlic 1 tbsp
Beef broth 100 ml
Green Beans 100 g
Potato 1 number
Cherry Tomato5numbers
Crushed Black Pepperalittle
Dried Rosemaryalittle
Fresh Parsleyalittle
Wash the Potato with skin and marinate with Salt, Crushed Black Pepper, Chopped Garlic, Dried Rosemary and Olive Oil, then roasted in oven for 25 minutes on 180ံC until get tender.
Melt 1 teaspoon butter inamedium saucepan over medium-high heat. Add onions and shallots; sauté2minutes. Add garlic; sauté 1 minute. Add Beef broth; cook3minutes or until onions are tender and liquid almost evaporates.
Add beans and Balsamic vinegar; cover and cook2minutes or until beans are crisp-tender. Remove from heat. Stir in remaining 1 teaspoon butter andapinch of salt and Crushed Black Pepper, keep warm.
Sprinkle steaks with remaining some salt and pepper. Heatacast-iron skillet over medium-high heat. Coat pan with some Olive Oil. Add steaks to pan; cook3minutes on each side or until desired degree of doneness. Let stand5minutes then serve with Balsamic Beans and roasted Potato.
Healthy Point for Pan Grilled Beef Tenderloin with Balsamic Green Beans.
Beef Tenderloin is so tender and texture all the time with taste, High in Protein and also easy to digest. Green Beans is always go so well with Beef or all kinds of red meat as suitable Green Vegetable, Roasted Potato as Carbohydrate for that dish, so healthy and full of nutrients as Protein from Beef Tenderloin that no oil and less saturated fat, Vitamins from Green Beans and Carbohydrate from Potato that all you need for the day. Green Beans cook with Balsamic Vinegar that make easy to digest and good in flavor, Roasted Potato that less oil and low calorie than other Carbohydrate. Use Olive Oil and Unsalted Butter give you more unsaturated fat that you need to aware for your Health, Onion and Garlic got lots of antioxidant and Cherry Tomato provide numerous health benefits including: Anti-oxidant support, Promotes heart health, Supports bone health, Anti-cancer benefits, Prostate health support and rich in Vitamin C, Vitamin K, Vitamin E, Vitamin B6 and some mineral like Zinc, Iron and so on…so you may have that dish as healthy and digestive meal for your diet so often.
အမဲမိုးခိုသား ဆိုသည်မှာ အလွန်နူးညံ့ပြီး အရသာကောင်းသော အသားပိုင်းဖြစ်ပါတယ်….ပရိုတင်း ပါဝင်မှု့ များ သလို အစာကြေလည်းလွယ်ပါတယ်….ပဲသီးစိမ်း ကတော့ အမဲသား နှင့် အနီရောင် အသားများ အတွက် အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ဗီတာမင်ပြည့်ဝတဲ့ အစ်ိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ…ကာဗိုဟုိက်ဒရိတ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကစီ ဓါတ်ကိုတော့ အာလူး ကရရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဒီ ဟင်းလျှာအတွဲအစပ် က ကျန်းမာရေး အတွက်သင့်တော်ပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝရျွ် ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အမဲမိုးခိုသား ၊ ဗီတာမင် ပြည့်ဝတဲ့ ပဲသီးစိမ်း နှင့် ကစီဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အာလူး တို့ နဲ့ တွဲဖက် ထားပါတယ် ၊ ပဲသီးစိမ်း ကို ဝိုင်နီရှာလကာရည် နဲ့ ချက်ထားတာကြောင့် အစာကြေလွယ်ပြီး အနံ့ အရသာ လည်းထူးခြား ပါတယ် ၊ အာလူး ကို အခွံမနွှာဘဲ အလုံးလိုက် ဖုတ်ထားတာကလည်း ကယ်လိုရီ နည်းပြီး ကစီဓါတ်ပြည့်ဝစေပါတယ်၊ သံလွင်ဆီ နဲ့ ဆားလွတ်ထောပတ် အနည်းငယ် သာသုံးထားတဲ့အတွက် မပြည့်ဝဆီ ပါဝင်မှု့ များတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ထိမ်းသိမ်းလိုသူများအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ် ၊ ကြက်သွန်နီ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ က ဆေးဘက်ဝင်ကြ သလို ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး များကလည်း နှလုံးကျန်းမာရေး ၊ အရိုးကျန်းမာရေး ၊ ရောဂါဘယများအား ကာကွယ်နိုင်ခြင်း များ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ယောကျာင်္းအားကို ပြည့်ဝစေရျွ် ဗီတာမင် C, E, K, B6, တို့ နဲ့ သံဓါတ်ကဲ့သို့ သတ္ထုဓါတ်များ လည်း ပါဝင် နေတာကြောင့် အလျဉ်းသင့်တိုင်း သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။
He was born in Yangon, the
Asparagus in Bulgogi Beef Roll with Mixed Julianne Salad (အမဲကညွှတ်လိတ် နှင့် သီးရွက်စုံသုပ်)
Basil Chicken (ကြက်ပင်စိမ်းကြော်)
BBQ Chicken with Lemon Grass (ကြက်သား နှင့် စပါးလင်ကင်)
BBQ King Prawn with Asian Cabbage Salad (ပုဇွန်ထုပ်ကြီးကင် နှင့် အာရှဂေါ်ဖီသုပ်)
Broccoli , Cauliflower & Red Cabbage Salad (ဂေါ်ဖီစုံသုပ်)
Carrot salad (မုန်လာဥနီအသုပ်)
Char grilled Chicken Wrap
Chilli, Garlic and Lemon Crab Pasta
Fried Bean Curd Salad (ပဲပြားသုပ်ထိုင်းပုံစံ)
Fruits & Vegetables Salad (သစ်သီး နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံသုပ်)
Grill Snow Cod Fish with Tomato & Oregano Sauce (ငါးနှင်းဖြူကင်)
Lentil and Garden Vegetable Curry (ပဲနီလေးဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံဟင်းရည်)
Mushroom, Tomato and Basil Frittata (မှို ၊ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး နှင့် ပင်စိမ်းကြက်ဥပေါင်း)
Pumpkin Soup with Seafood
Seafood Hor-fun (ပင်လယ်စာ ဆန်ခေါက်ဆွဲပြားကြော်)
Simple Caesar’s Salad
Soba noodle and tuna salad
Spaghetti with Clams and Aromatic Herbs
Taro Croquette (ပိန်းဥ Croquette)
Vegetable Salad, garlic crouton with French dressing
Wai Ki Ki Chicken, Pineapples, Dark Soya Sauce and Ginger, with Brown “B1″, healthy Rice
တာရီယာကီ ဆယ်မွန်ငါးကင်နှင့် စပါဂတ်တီ (Healthy)
ပင်စိမ်း အာလူး ဆင်ခေါင်းပဲ နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ပြုတ်ချက် (Basil Potato and Chickpea with Tomato Stew)
သင်္ချာကော်ပြန့် (ဂဏန်းသားကော်ပြန့်စိမ်း) (Spring Rolls)
အီတလီလျှံ Minestrone ဟင်းချို
ကြက်ရင်ဗုံချိစ် အစာသွပ် နှင့် မှို၊ အရွက်စုံသုပ်
ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် (Fried Bitter Gourd)
Chef Sunny's recipes
ကြက်ဥအပျော့ကြော် (Soft Scrambled Eggs)
၅ မိနစ် ပေါင်မုန့်ပူတင်း (5 Minutes Bread Pudding)
© 2010-2012 CityMart Supermarket.
(951) 508460 / 61 / 62
Email : enquiry@city.com.mm